अमेरिकामा क्षेप्यास्त्र हमला हुँदै गरेको खबर फैलिएपछि 'हंगामा'
HOME » अमेरिकामा क्षेप्यास्त्र हमला हुँदै गरेको खबर फैलिएपछि 'हंगामा'
डिसी नेपाल , ३० पौष २०७४
बीबीसी । अमेरिकाको हवाई राज्यका गभर्नर डेभिड इगेइले एकजना कर्मचारीले आफ्नो काम सकिने बेला गलत बटन थिचेकोले गलत सूचना गएको भन्दै क्षमा मागेका छन्।
क्षेप्यास्त्र हमला हुँदैछ भन्ने सतर्कता सन्देश गलत हो भन्ने घोषणा हुनुअघि उक्त सन्देशले त्यहाँका बासिन्दालाई शनिवार बिहान तनावमा पारेको थियो।
मोबाइल फोन प्रयोगकर्ताहरूले हवाईमा बलिष्टिक क्षेप्यास्त्र हमला हुन लागेको भन्दै सतर्कता सन्देश पाएका थिए। अमेरिकाको संघीय सञ्चार आयोगले त्यसबारे पूर्ण अनुसन्धान थाल्ने जनाएको छ।
उत्तर कोरियाले क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरिरहेका बेला हवाई नजिक रहेकोले त्यहाँ पनि परीक्षण गर्न सक्ने सम्भावनाका कारण त्यहाँ सतर्कता प्रणाली राखिएको छ। गत महिना उक्त राज्यले शीतयुद्धको अन्त्यपछि पहिलोपटक परमाणु हमला हुन लागे त्यसबारे सतर्क गराउन आवाज दिने प्रणाली परीक्षण गरेको थियो।
सबै ठूला अक्षरमा पठाइएको सन्देश स्थानीय समय अनुसार बिहान ८ बजेर ७ मिनेटमा पठाइएको थियो। त्यसको १८ मिनेटपछि उक्त सन्देश गलत भएको भन्दै इमेल पठाइयो। तर मोबाइलमै सन्देश भने अर्को ३८ मिनेटसम्म नपठाइएको बताइएको छ। बीबीसीका डेभिड विलिसले भने, हवाई राज्यको आपतकाल व्यवस्थापनसम्बन्धी संस्थालाई उक्त गल्ती सच्याउन झण्डै ४० मिनेट लागेको थियो।
आपतकाल व्यवस्थापनसम्बन्धी संस्थाले भने ट्वीटमार्फत कुनै पनि क्षेप्यास्त्र हमलाको खतरा नभएको उल्लेख गरेको थियो। टेलिभिजन र रेडियोले पनि घर भित्रै बस्ने सन्देश दिँदै आफ्ना प्रशारणहरू बन्द गरेका थिए।
सतर्क रहन आएको उक्त सन्देशपछि केही मानिसहरु गल्लीमा भागेका थिए भने केहीले अनियमित रूपमा गाडीहरू गुडाए र केहीले चाहिँ घरको सुरक्षित कोठामा बस्ने बन्दोबस्त मिलाए। गभर्नरले त्यस्ता गल्ती नदोहोरिऊन् भन्नका लागि कदमहरू चालिसकेको बताएका छन्। तर किन सतर्कताका लागि बजाइने अन्य आवाजहरू जो छुट्टै बजाइयो त्यो पनि बजे भन्ने चाहिँ स्पष्ट नभएको उनले बताए।
नेपाली कलाकारहरुले दशैंको टीका र जमरा यसरी लगाए (फोटोफिचर)
भारतीय रियालिटि शो मा गएका दुई नेपाली बालकको अनुभव यस्तो (भिडियो)
पत्याउनै नसकिने दृष्य देखियो निर्मल निवाशमा, दशैंको टीका थाप्न जानेहरु..
श्रीकृष्णको मृत्युपछि पहिलो पटक टीका लगाइन् श्वेता खड्काले (फोटोफिचर)
राष्ट्रपति भण्डारीको हातबाट प्रधानमन्त्री ओलीले लगाए टिका
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहबाट सर्वसाधरणलाई टिका
बार्सिलोनामा स्वारेजको स्थानमा फिर्मिन्हो !
मानिसको भीडमा यसरी गुडे रेल, ५० भन्दा बढिको मृत्यु (भिडियो सहित)
लिक भएको यो भिडियो हेरेपछि तपाईँको आँसु झर्न सक्छ (भिडियोसहित)
प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो पटक सर्वसाधारणलाई लगाए टिका
कृष्णनगरमा कर्फ्यू हटाइयो, जनजीवन सामान्य
दौडिँदै बच्चा भएको ठाउँमा पुगिन्, भनिन् प्रेतात्मा थियो (भिडियो)
अवैध सम्बन्धको आशंकामा पत्नीको हत्या, हत्यापछि शवसँगै विताए रात
भिरमौरीको मह झिक्न जाँदा भिरबाट लडेर मृत्यु
कति छ आज अमेरिकी डलरको भाउ, हेर्नुहोस् कुन देशको कति पुग्यो ?
दसैँको भोलिपल्ट मापसे गरेर श्रीमतीको हत्या, हत्या गर्ने अभियुक्त पक्राउ
घाँस दाउरा बेचेको आम्दानी विद्युतीकरणमा
भारतीय विद्युत्को भरमा दार्चुला
जहाँ पोर्न फिल्म हेर्दा पक्राउ परिए दिइन्छ मृत्युदण्डको सजाय
'अमेरिका ऐतिहासिक सन्धिबाट अलग्गिने'